Dekedda Muqdisho oo adeeg casri ah lagu soo kordhiyay & Sii-hayaha RW oo xariga ka jaray +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Warar Cusub Dekedda Muqdisho oo adeeg casri ah lagu soo kordhiyay & Sii-hayaha RW...
Dekedda Muqdisho oo adeeg casri ah lagu soo kordhiyay & Sii-hayaha RW oo xariga ka jaray +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, mudane Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa xariga ka jaray Masawac laga hir geliyay magaalada Muqdisho oo loogu tala galay in maraakiibtu ay si fudud ugu soo hirtaan dekadda Muqdisho.
Musawaca oo iftiinkiisa xilliyada habeenkii ay meel fog ka arki karaan howl-wadeennada maraakiibta ayaa sahlaya inay gartaan masaafada dekaddu u jirto iyo inay si fudud ugu soo hirtaan.
Sii hayaha xilka Wasiirka Koowaad ee dalka ayaa caddeeyay in dib u furitaanka Musawaca oo 100 sano jirsaday ay qayb ka tahay horumarinta dekadaha gaar ahaan dekadda Muqdisho oo kamid ah ilaha dhaqaale ee dalka.
Xukuumadda ayaa dadaal xooggan gelisay dib-u-dhiska dalka, waxaana horay sidaan oo kale dib loogu soo celiyay edeegyo muhiim u ahaa dowladnimada iyo dib-u-kabashada dalka.
Adeeg casri ah
UNHCR: In ka badan 24,000 oo qaxooti Ajnabi ah ayaa galay gudaha dalka Soomaaliya
Nuxurka Shirkii dhexmaray Shanta Madaxweyne goboleedka ee dalka
Guddoomiyihii Degmada Hodan oo maanta lagu aasay Muqdisho +(SAWIRRO)